Banijya News | » नेपाल भ्रमण वर्षको उद्धघाटन हुँदैः २०२० मा आउँछन् त २० लाख पर्यटक ? नेपाल भ्रमण वर्षको उद्धघाटन हुँदैः २०२० मा आउँछन् त २० लाख पर्यटक ? – Banijya News
नेपाल भ्रमण वर्षको उद्धघाटन हुँदैः २०२० मा आउँछन् त २० लाख पर्यटक ?
१५ पुष २०७६
नेपाल सरकारले घोषणा गरेको ‘नेपाल भ्रमण वर्ष सन् २०२०’ भोली भब्य रुपमा सरकारले उदघाटन गर्दे छ । २०७४ साउन २९ गते नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२० मनाउने घोषणा भएसँगै पर्यटन क्षेत्रमा नयाँ तरंग उत्पन्न भएको छ । आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ को नीति तथा कार्यक्रमले पनि २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखेको छ । अभियान सफल बनाउन सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट के–कस्ता तयारी भएका छन् त्यस्को लेखाजोखा भने कम भएको छ । तयारी त्यसअनुरुपको छैन, त्यसैले साँच्चिकै २० लाख पर्यटक आइपुग्छन् वा पूर्वानुमानको तथ्यांक मात्रै सार्वजनिक गरिएको भन्ने प्रश्न पेचिलो बन्दै गएको छ ।
पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईलेसमेत एक लेखमार्फत २० लाख पर्यटक भित्र्यानउ असहज नभएको बताएका छन् । पर्यटन वर्ष २०२० लाई लक्षित गरी विदेशका प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम र विज्ञापनहरुले पनि पर्यटक आगमन बढाउन ठूलो मद्दत पुग्ने दाबी सरकारको छ ।
सरकारले नेपाल भ्रमण वर्ष लक्षित गरी खरिद गरिएका नयाँ वाइडबडी जहाजहरु भ्रष्टाचार काण्डमा जेलिएपछि भने अनुसारले उड्न सकिरहेका छैनन् । मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता घनश्याम उपाध्याय नियमित रुपमा पर्यटक आगमनमा भइरहेको वृद्धिदर अनुसार नै २०२० सम्म सजिलै १५ लाख पर्यटक आउने दाबी गर्छन् ।
आम चूनौतीकाबीच पनि सरकार, पर्यटन व्यवसायी तथा आम पर्यटनकर्मीहरुले पर्यटन वर्षलाई सफल बनाउने ‘कसम’ खाइ नै रहेका छन् । उनिहरुको उक्त प्रतिबद्धताहरुलाई केही नेपालीहरु पनि सहयोगी बचन दिइरहेका छन् । तर, समग्र पर्यटन क्षेत्रको समन्वयकारी एक मात्रै संस्था नेपाल पर्यटन बोर्ड यतिबेला नेतृत्वबिहिन छ । खासगरी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपकराज जोशीको चारवर्षे कार्यकालअवधि सकिएकाले नेतृत्वबिहिन अवस्था देखा परेको हो । तर, जोशीको कार्यकाल कहिले सकिने भन्ने विषय जोशीको नियुक्तिसँगै पक्का भएको विषय हो । अहिलेसम्मको अधिकतम संख्याभन्दा दोब्बर पर्यटक भित्र्याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य अगाडि हुँदाहुँदै यो विषयमा सरकारको ध्यान दिउन जस्ले गर्दा लक्ष्यमा असरा पर्ने स्ष्ट छ ।
अहिले कति पर्यटक नेपाल आउँछन्
नेपालमा भएको लामो गृहयुद्ध माओवादी जनयुद्ध सुरु भएको सन् १९९६ मा जम्मा ३ लाख ९३ हजार पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेको तथ्यांक छ । त्यसपछि ‘भिजिट नेपाल इयर १९९८’ मा वर्ष ४ लाख ६३ हजार पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेको पर्यटन मन्त्रालयको तथ्यांक छ भने सन् १९९९ करिब ५ लाखले नेपाल भ्रमण गरेका थिए । त्यसपछि सन् २००१ मा पनि करिब ३ लाख ६१ हजार पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेकोमा सन् २००२ मा पर्यटकको संख्यामा गिरावट आउँदै २ लाख ७५ हजारमा झरेको थियो । त्यसपछिको नेपाली राज्य व्यवस्थामा भएको परिवर्तनसँगै सन् २००७ मा ५ लाख २६ हजार पुगेको देखिन्छ भने सन् २०१५ मा नेपालमा आएको विनाशकारी भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीलगायतका कारणले पर्यटकको सख्यामा कमी आएको देखिन्छ । शान्तिसँगै देशमा पर्यटक आगमन बढ्दो छ । वृद्धि दर भने सीमित छ । त्यसो त सन् २०१७ मा झन्डै ११ लाख पर्यटक नेपाल आएका थिए हाल वार्षिक करिब १२ लाख पर्यटक आइरहेका छन् । विदेशी पर्यटक भित्र्याउने एकमात्रै हवाई मार्ग त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हो । सन् २०१८ मा हवाईमार्गबाट ९ लाख ६९ हजार र स्थलमार्गबाट दुई लाख ३ हजार गरी कुल ११ लाख ७३ हजार पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् । यतिका पर्यटक नेपाल आउँदा तयारी भने अझै फितलो छ । अहिलेकै जस्तो कमजोर पूर्वाधार, सेवासुविधा र प्रवद्र्धनले लक्ष्य अनुसार पर्यटक भित्र्याउन कठिन समेत देखिन्छ ।
छैन पर्यटकका लागि पूर्वधार
पूर्वधार एकातर्फ भ्रमण वर्षमा २० लाख पर्यटक नेपाल ल्याउने घोषणा गर्दै गर्दा ती पर्यटकका लागि चाहिने आवश्यक पूर्वाधार विस्तार भयो या भएन, मुख्य प्रश्न हो । त्यसो त सन् २०१७ मा झन्डै १० लाख पर्यटक नेपाल आएका थिए । दुई वर्षको अन्र्तरालमा पर्यटकको संख्या दोब्बर बनाउने चुनौती पनि छ । कतिपयले भ्रमण वर्ष घोषणालाई सरकारको महत्वाकांक्षी योजना भनिरहेका छन् । नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा भारतको हिस्सा अग्रणी छ भने चीन र अमेरिकाबाट पनि पर्यटक आउने क्रम बढ्दो छ । हिजोका दिनमा नेपालमा पर्यटक सन्तोषजनक रूपमा आउने देशबाट अझ बढाउनुपर्ने र नयाँ क्षेत्रको खोजी पनि गर्नुपर्नेछ । भौगोलिक विविधताले भरिपूर्ण भएकाले नेपालमा पर्यटक आउन रुचाउँछन् पनि, तर ती पर्यटकका लागि उचित सुविधा दिनुपर्ने जिम्मेवारी हाम्रो हो । भ्रमण वर्षलाई सफल बनाउन सरकारले व्यवसायी सुरज वैद्यलाई यस अभियानको राष्ट्रिय कार्यक्रम संयोजकसमेत नियुक्त गरिसकेको छ ।
त्यतिबेला प्रत्यक्ष सम्बन्धित मन्त्रालय पर्यटन, नागरिक उड्डयन र संस्कृति र अर्थमन्त्रालयबीच समन्वय हुन नसकेको यर्थाथ हाम्रा बीचमा ताजै छ । पर्यटन मन्त्रालयले बनाएको निर्दे्शिकालाई स्वयं मन्त्रिपरिषद्ले पारित गर्न नसक्दा सरकारले नै घोषणा गरेको पर्यटन वर्षमा अघोषित आन्तरिक विवादजस्तै सृजना भयो । खासमा तत्कालीन अवस्थामा सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीलाई घुमफिर गर्नका लागि सातदिने भुक्तानीयुक्त बिदा (पेड–लिभ) दिइ कर्मचारीहरूमा पुनर्ताजगीसहित आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनमा समेत योगदान पुग्ने लक्ष्य राखिएको थियो । उक्त प्रस्तावको कार्यान्वयनमा सरकारका सबै निकायबीच नै तालमेल हुन नसक्नु दुखद विषय थियो । होटल व्यवसायी भने त्यत्रो संख्यामा पर्यटक भित्र्याउन अनुकुल मौसममा ‘क्याम्पिङ’ गर्नुपर्ने भए पनि त्यसमा कुनै सहकार्य र थालनी नगरिएको बताउँछन् । पर्यटनका लागि हवाई सेवापछिको होटल पूर्वाधार थप्न प्रोत्साहन गर्ने विषयलाई भने सरकारले बेवास्ता गरिरहेको उनीहरुको आरोप छ । ब्यवासयीहरु केबल हल्लामा मात्र पर्यटन ल्याउने भन्नु तर भौतिक संरचनामा ध्यान नदिनुले पनि पर्यटन बर्षमा सरकार कमजोर रुपमा प्रस्तुत भएको आरोप लगाउँछन् ।
पर्यटकको संख्यामा वृद्धि भए पनि खर्च र बसाइ दिन खस्कँदो छ । सन् २०१७ मा प्रतिदिन औसतमा ५४ डलर खर्च हुन्थ्यो । सन् २०१८ मा ४४ डलरमा ओर्लियो । यो तथ्यसँगै अन्तराष्ट्रिय बजारमा नेपाल सस्तो गन्तव्यका रूपमा प्रचारित भएको प्रमाणित हुन्छ । यसले एकातिर सरकारलाई संख्या होइन, गुणस्तरमा जोड दिन सन्देश दिन्छ भने अकोतर्फ सस्तो आइटिनरी बेच्ने व्यवसायीलाई पनि सचेत गराउँछ ।
नेपाली पर्यटन क्षेत्रमा विस्तारै पर्यटकको संख्यामा भने बृद्धि भइरहेको छ । प्रविधिको विकास र विश्व समाजमै घुमफिरप्रतिको बढ्दो रुचीमा कारण विस्तारै नेपाली पर्यटन बजारले पनि उचाइ लिइरहेको छ । योसँगै सरकारले पनि पर्यटन क्षेत्रलाई आर्थिक सम्बृद्धिको मेरुदण्ड भनेर प्रचारात्मक शैलीमा अगाडि ल्याइरहेको छ । तर, पर्यटकलाई लागि आवश्यक आधारभूत आवश्यकता, पर्यटकीय पूर्वाधारमा भने स्वभाविक परिवर्तन बाहेक व्यापक सुधार हुन नसक्नु सुखद पक्ष होइन । यसर्थ, आधारभूत पूर्वाधारमा पनि कम्प्रमाइज गर्नुपर्ने सन्दर्भमा नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई सफल बनाउन चुनौतीका चट्टानहरु हाम्रासामू खडा छन् । तर, चूनौतीसँगै सम्बृद्ध नेपाल अभियानको ढोकाको ‘चाबी’ पाउने सपना पनि सरकारको छ ।
भ्रमण वर्षको सम्मुखमा पुराना गन्तव्यको सौन्दर्यकरण र गुणस्तर वृद्धिमा सक्रियता देखिएको छैन । पर्यटकीय गन्तव्य आसपासकै सडक वर्षौंदेखि निर्माणाधीन छन् । अन्तर्राष्ट्रिय उडान थपिन सकेका छैनन् । यही अवस्था रहे लामो ट्रान्जिटसहित विदेशी विमानबाट नेपाल आउने पर्यटकलाई यात्रा खर्च महँगो पर्न जानेछ । अर्कातफ उनीहरूले हवाई सेवामा खर्चिने ठूलो रकम विदेसिनेछ । भूकम्पले क्षति पु¥याएका सम्पदामध्ये कतिपय पुनर्निर्माणकै चरणमा छन् ।
सरकार पर्यटकीय वातारण बनाउन चुकेको छ । पदयात्रा र हिमाल आरोहणमा निस्किएका पर्यटकलाई बिरामी बनाई उद्धार गर्ने ‘फेक रेस्क्यु’ मा संलग्नलाई कारबाही गर्न सरकार सक्रिय हुन सकेको छैन । विदेशी बिमा कम्पनीले औपचारिक रूपमा उठाएका छन् । फेक रेस्क्युका कारण बिमा प्रिमियम महँगो मात्र भएन रिस्क जोनमा परेको छ । तालुकदारहरू भने यस्तो गम्भीर विषयलाई प्रचारबाजी मात्रै ठान्छन् ।